DNS na DHCP na openSUSE 13.2 "Harlequin" - Netwọk SMB | Site na Linux
DNS na DHCP na openSUSE 13.2 "Harlequin" - netwọk SMB
Pikico | | Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
General index nke usoro: Netwọk Kọmputa maka SMEs: Okwu Mmalite
Ebumnuche bụ isi nke isiokwu a bụ igosi otu anyị nwere ike isi nweta a DNS na DHCP nkesa na openSUSE site na ngwa ọrụ nhazi YaST kachasị mma, yana niile -ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta- site na ya eserese interface.
Anyị na-ekwe gị nkwa nwụnye zuru ezu site na eserese eserese, ma e wezụga -Iwu obula nwere ihe di iche, nri?- nke otu consoles ka ịlele ziri ezi ọrụ nke ụzọ Bind9 + ISC-DHCP-nkesa, ahazi site na iji YaST - Ọzọ Mbido Ngwá Ọrụ nke bu ihe eji eme nke oma nke oma maka ngwanro nghazi na nhazi usoro.
Ọrụ mbụ - yana nke kachasị mkpa na njirisi anyị - nke a ga-etinye n'ọrụ na SME Network, bụ ọrụ ahụ DNS - DHCP. Ọ bụrụ na anyị achọghị iji aka anyị hazie ọnụọgụ ntanetị nke ọrụ ọ bụla, anyị agaghị eme na-enweghị ọrụ DHCP, dịka akọwara mgbe e mesịrị. E nwekwara ọrụ oge ma ọ bụ NTP.
1 DNS: ndabere
3.1 DNS gbara ajụjụ ndị Windows ahịa mere
4 Kernel nke awụnyereSSS na gburugburu desktọọpụ
5 Ndụmọdụ dị mkpa
6 Ọrụ ndị anyị nwere ike iwepu iji chekwaa akụrụngwa
8 Nzọụkwụ ntinye site na ihe oyiyi
8.1 Nkwado nwụnye
8.2 Ntinye, nkwupụta nke nchekwa na usoro melite
8.3 Ntinye na nhazi nke ọrụ DNS na ọrụ DHCP na openSUSE
N’April 2013 anyị bipụtara na Ndokwa usoro 5 ederede raara nye iji mejuputa isi DNS na Debian:
Primary Master DNS maka LAN na Debian 6.0 (I)
Primary Master DNS maka LAN na Debian 6.0 (II)
Primary Master DNS maka LAN na Debian 6.0 (III)
Primary Master DNS maka LAN na Debian 6.0 (IV)
Primary Master DNS maka LAN na Debian 6.0 (V)
Edere nchịkọta nke isiokwu ndị dị n'elu na usoro HTML maka nbudata.laa azụ- Site na ịwepụta Debian "Squeeze" ntọhapụ, nkọwapụta na echiche ndị edepụtara na ha ka na-adaba.
Ọ bụ ya mere na anyị agaghị eme Okwu Mmalite nke DNS. Gụọ akụkọ ndị a ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ha na-enyekwa njikọ maka akwụkwọ DNS pụrụ iche.
En openSUSE, folda kachasị mkpa na faịlụ metụtara ọrụ a bụ:
nchekwa / wdg / aha.conf
folda / wdg / akpọrọ.d
nchekwa / wdg / sysconfig / aha ya
mmemme / usr / sbin / aha-checkconf, / usr / sbin / aha-checkzone, / usr / sbin / aha-compilezone, / usr / sbin / named-journalprint
folda / usr / share / doc / nchịkọta / kee /
folda / var / lib / akpọrọ /
folda / var / lib / akpọrọ / dyn /
nchekwa /etc/init.d/ aha
njikọ ihe atụ / usr / sbin / rcnamed
Ebumnuche nke Protocol Usoro Nhazi Dynamic - Nhazi usoro nhazi nke ndị ọbịa (DHCP), bụ ekenye nghazi nhazi maka netwọkụ nke kachasị - site na ihe nkesa DHCP- kama iji aka ya hazie ebe ọrụ ọ bụla. Kọmputa ahaziri site na iji DHCP enweghị ike ịchịkwa adreesị IP ya. A haziri kọmputa kọmpụta a n'ụzọ ọ na - enye ya ohere ịhazi nhazi ya na akpaghị aka, dịka ntuziaka nke ihe nkesa ahụ.
Ọrụ DHCP na-eme ka ndụ dịrị ndị nchịkwa Network mfe. Site na ịhazi sava DHCP, ị nwere ike kọwaa oke dịka aha ngalaba, ọnụ ụzọ ámá, oge ma ọ bụ oge nkesa, sava DNS, sava WINS ma ọ bụrụ na ejiri ya, mgbasa ozi IP adreesị - agbasa ozi n'ikuku, Adreesị IP na ihe nkpuchi ntanetị nke kọmputa ndị ahịa, aha onye ahịa kọmputa, na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ.
Mgbanwe ọ bụla, ọbụlagodi nnukwu mgbanwe na mpaghara metụtara adreesị IP na ntọala netwọkụ, enwere ike mejuputa ya, ọ bụrụ na anyị dezie ma ọ bụ gbanwee ntọala sava DHCP.
Dị ka ọ dị, ihe nkesa DHCP na-edekọ ndekọ zuru ezu nke adreesị IP ma ọ bụ mgbazinye, na n'ozuzu oke oke bụ adreesị MAC nke kaadị netwọk ọ bụla ma ọ bụ NIC - Network Interface Kaadị. Na openSUSE, adreesị IP agbazinye ma ọ bụ nyere ụgwọ nke DHCP nyere na echekwara na faịlụ ahụ /var/lib/dhcp/db/dhcpd.onwe.
Ihe ngwugwu dhcp-doc, nke arụnyere na folda ahụ / usr / share / doc / nchịkọta / dhcp-doc, na-enye ezigbo akwụkwọ - na Bekee- banyere ọrụ a.
The DHCP nkesa nhazi faịlụ bu / wdg /dhcpd.conf. Ọzọ DHCP nhazi faịlụ bu / wdg / sysconfig / dhcpd, ma ọ bụ ebe ị kọwapụtara maka ntanetị ntanetị - ma ọ bụ nke ntanetị ntanetị- ihe nkesa ga-aza.
Ma ebe ọ bụ na anyị nọ n'etiti systemd, anyị nwekwara faịlụ ahụ /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service.
Dị ka anyị kwere nkwa na anyị agaghị eji njikwa ahụ, anyị hapụrụ ndị ọzọ nke jụrụ ndị hụrụ Jehova n'anya bash. Maka ndekọ Ihe njikwa ahụ anaghị ata ahụhụ.
Ọ bụ ezie na anyị kwere nkwa na anyị agaghị eji njikwa ahụ ma e wezụga oge ole na ole, anyị na-atụ aro na-eso iwu ndị a -dị ka mgbọrọgwụ- mgbe ọrụ DNS - DHCP enyelarị ma ọ dịkarịa ala otu adreesị IP dị ike, nke na-eche na ha agwụchala ọrụ abụọ ahụ ma nọrọ na oge nnwale ego:
systemctl ọnọdụ aha ya bụ ọrụ
systemctl ọnọdụ dhcpd.service
systemctl ọnọdụ dhcp-server.service
aha-akwụkwọ akụkọ /var/lib/named/dyn/desdelinux.fanX.jnl
Ndị ọrịa nke «mbipute»Anyị na-akwado gị ile anya -tumadi rue ubochi isi- na faịlụ:
na n'ozuzu ya na faịlụ niile na folda ahụ / wdg / ntinye.d..
DNS gbara ajụjụ ndị Windows ahịa mere
Ọzọkwa, na njikwa, na-agba ọsọ dị ka onye ọrụ mgbọrọgwụ iwu:
akwụkwọ akụkọ -f
Wepụta oge na-ekiri Windows ahịa na-ajụ ajụjụ DNS maka saịtị dị na mpụga nke Enterprise LAN. N'ihe atụ edepụtara n'isiokwu a, enweghị onye ntụgharị ọ bụla - zipuru, maka nzube doro anya nke igosi atụmatụ a nke sistemụ arụmọrụ Microsoft® Windows.
Kernel nke awụnyereSSS na gburugburu desktọọpụ
Ọ bụ mmasị anyị iji isi dị ike dịka enwere ike maka servidores. Mgbe ahụ anyị na-atụ aro usoro iji nweta ya.
Ka anyị na-ahọrọ nwụnye na desktọọpụ LXDE, openSUSE na-etinye ndabara na ndabara «kernel-desktọọpụ»Kachasị anya maka desktọọpụ.
Ọ bụrụ na anyị emechaa chọọ iji kernel ọkọlọtọ - kernel-ndabereNaanị anyị ga-etinye ya na YaST ngwugwu Manager, reboot usoro, họrọ «Nhọrọ dị elu maka openSUSE»On Ihuenyo mbu, ma họrọ kernel-ndabere. Versionsdị kernel ahụ bụ otu.
N'ikpeazụ, anyị ga-ewepụ ihe kernel-desktọọpụ site na otu Ngwugwu ngwugwu, ebe obu idide na-ewere ya dị ka ihe dị ọhụrụ karịa nke kernel-ndabere, ma ọ bụrụ na ọ dị, ọ ga-ahọrọ ya dịka nhọrọ mbụ. Ebe ọ bụ na anyị anaghị amasị "ọgbaghara na" ihe idideAnyị na-ahọrọ iwepụ kernel desktọọpụ, naanị n'ihi na anyị agaghị eji ya ọzọ.
Cheta na: Mgbe anyị wepụrụ usoro si kernel-desktọọpụ, a na-ewepụ nsụgharị niile nke kernel ahụ na akpaghị aka. Anyị nwere ike ịlele ya ọzọ site na ịhọrọ "Nhọrọ dị elu maka openSUSE" na ihuenyo ụlọ.
Ndụmọdụ dị mkpa
Etinyekwala njem nke itinye n'ọrụ DNS - ọrụ DHCP yana sistemụ arụmọrụ ọ bụla, na-ebughi ụzọ kpochapụ echiche ndị bụ isi. Na ọrụ ndị dị mkpa na netwọk dị ka DNS, njehie echiche na-akwụ ụgwọ nke ukwuu na gburugburu ebe obibi.
Ọrụ ndị anyị nwere ike iwepu iji chekwaa akụrụngwa
Site na modul YaST «Onye njikwa ọrụ», ozugbo ịwụnyechara ihe niile yana iji chekwaa akụrụngwa akụrụngwa, anyị nwere ike iwepu usoro ọrụ nke, na nke a, adịghị mkpa. Ihe atụ:
iko: usoro obibi akwụkwọ Usoro Unix Printing Common Unix
- lvm2-lvmetad: Ezi uche olu olu metadata daemon, naanị ma ọ bụrụ na anyị anaghị eji usoro ezi uche dị na ya
ModemManager: Njikwa ngwaọrụ
Abụ m onye iro nke ntụgharị asụsụ, ọ dị mma?
idide: iwu njikwa GRna Unwere afọ ojuju Bonye na-ebu
NTP: Network Taha Pusoro. Protocol eji maka mmekọrịta nke clocks nke kọmputa dị iche iche site na netwọk
LAN: Ntanetị mpaghara - Lokal Area Network
SPF: «Okpokoro Ozi N'uba«. Anti SPAM usoro nke na-enye ohere ka ihe nkesa ozi nyochaa na SMTP mbido dị irè maka adreesị iji zipu ozi-e.
TSIG: Ahịa Mbinye aka - Tmmeghari SIGọdịdị. Akọwa na RFC 2845 "Nyocha Nzuzo Nzuzo Nzuzo maka DNS«
UUID: Ihe omuma ihe omuma - Nchọpụta Pụrụ Iche Pụrụ Iche
Nzọụkwụ ntinye site na ihe oyiyi
Anyị weghaara ngụkọta nke ihuenyo 71 iji gosipụta Nzọụkwụ Nzọụkwụ dị ka o kwere mee. Na nke ọ bụla n'ime nrụnye nrụnye, OpenSUSE na-akwado ọrụ anyị na ịdị adị nke bọtịnụ Enyemaka - Enyemaka-na-adịkarị na ala aka ekpe.
Anyị agaghị enye nkọwa nke nseta ọ bụla dị ka a na-ahụta ya dị oke. Dị ka okwu na-aga, «A foto ruru otu puku kwuru".
Foto 01 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 02 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 03 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 04 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 05 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 06 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 07 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 08 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 09 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 10 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 11 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 12 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 13 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 14 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 15 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 16 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 17 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 18 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 19 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 20 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 21 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 22 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 23 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 24 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 25 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 26 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 27 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 28 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 29 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 30 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 31 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 32 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 33 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 34 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 35 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 36 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 37 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 38 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 39 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 40 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 41 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 42 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 43 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 44 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 45 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 46 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 47 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 48 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 49 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 50 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 51 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 52 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 53 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 53-A - DNS na DHCP na openSUSE
Foto 54 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 55 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 56 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 57 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 58 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 59 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 60 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 61 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 62 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 63 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 64 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 65 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 66 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 67 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 68 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 69 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 70 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Foto 71 - DNS na DHCP na emegheSUSE
Dị ka ihe echichi anyị nwere ike iji DVD oyiyi dị ka nke anyị ji mee post a emegheSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso, ma ọ bụ ụdị ka elu. Ọ bụrụ na akụrụngwa enweghị DVD ọkpụkpọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị mfe iji ebe nchekwa - mbanye ihe, anyị nwere ike ime ya dị ka egosiri na isiokwu ahụ Ebe nchekwa na Autostart iji wụnye Debian, CentOS, ma ọ bụ openSUSE. Mgbe ị wụnye sistemụ arụmọrụ, ịkwadebe ebe nchekwa ị nwere ike iwunye ma jiri mmemme ahụ Onye na-ese ihe site na SUSE Studio.
Otú ọ dị anyị na-atụ aro nwale ibido na igwe mebere.
Ntinye, nkwupụta nke nchekwa na usoro melite
Anyị na-atụ aro maka ihe nkesa na- dns.fromlinux.fan ihe dị ka megabytes 768 nke RAM na draịvụ ike 20 GiB. Ebe nchekwa ahụ bụ n'ihi na anyị ga-eme ya na eserese eserese.
Na Foto 05Banyere Network nhazi, anyị anaghị akpọsa aha Server ọ bụla n'ihi na ọrụ ahụ bụ nke etinyere. Ọ bụrụ na ikwuputa ihe nkesa ndị ọzọ, a ga-ewere ya dị ka redirector - zipuru, na anyị chọrọ iji mejuputa ọrụ ahụ n'ụzọ dị otú a iji chọpụta nkwụsi ike nke Microsoft® Operating Systems na ọchụchọ ha na saịtị na Internetntanetị.
Anyị na-ekepụta nhazi ahaziri iche nkewa dịka ọkacha mmasị anyị. Enwere onwe gị ịhọrọ ma mejuputa nke ịchọrọ.
Foto 15: "Nhọrọ Fstab". Anyị na-ahọrọ na a na-etinye akụkụ ahụ dịka LABEL ha si dị - LABEL ma ọ bụghị dị ka UUID ya, nke bụ nhọrọ ndabara. Mgbe ị wụnye usoro gụrụ ọdịnaya nke faịlụ ahụ / wdg / fstab.
Ihe nkesa NTP iji mekọrịta oge bụ kpọmkwem Host Hypervisor ebe sava DNS - DHCP na-agba.
N'otu ụzọ ahụ anyị họọrọ desktọọpụ LXDE n'ihi na ọ dabara na mkpa anyị, ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla ọzọ nke onye nrụnye nke openSUSE.
Aha onye ọrụ a họọrọ «Buzz»Bụ ịsọpụrụ nkesa kachasị amasị anyị. Ma ọ dịghị ihe. 😉
Na Foto 22Rịba ama na anyị na-emeghe ọdụ ụgbọ mmiri SSH na Firewall, ma nwee ọrụ SSH.
Biko were oge gị mgbe ị na-ahọrọ software ịwụnye. Ọmarịcha ngwugwu ngwugwu kwesịrị ịnyagharịa, dị ka egosiri na Foto 23.
Foto 35, 36, 37 na 38: Mgbe ị wụnye sistemụ arụmọrụ na DVD ma ọ bụ nkwado ndị ọzọ, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ikwupụta ebe nchekwa iji melite sistemụ anyị, ma ha bụ ndị obodo ma ọ bụ na Internetntanetị. N'okwu anyị, anyị gbanyụọ nchekwa dị iche iche nke OpenSUSE na-enye na sava ya na Internetntanetị, anyị gbakwunye nke anyị Obodo. Ya bụ, anyị nwere repositories database, Onye ngwugwu, mmelite, OznỌd y Na-abụghị Oss, zuru ezu maka ọrụ a chọrọ, na iji mee anyị tebụl na iwu niile. 😉
Foto 39 na 40: Malitere na-akwụsị mmelite nke ngwugwu ngwugwu nke YaST. Ke akpa ihuenyo anyị na-ahapụ ndabara selections. Naanị anyị pịa bọtịnụ ahụ Tee.
Foto 41, 42 na 43: Mgbe ngwugwu Manager emelitere onwe ya, ọ na-ebupụta ihuenyo na nchịkọta site na usoro ndị ọzọ ka emelitere. N'ime ya, anyị na-anakwere nhọrọ ndabara.
Foto 44: Ihuenyo kpochapụwo iji kwụsị oge na LXDE.
Ntinye na nhazi nke ọrụ DNS na ọrụ DHCP na openSUSE
Foto 47: Ka anyị ghara ichefu ịmepụta igodo nzuzo maka mmelite na-agbanwe agbanwe nke mpaghara DNS, nke bụ site na Linux.fan y 10.168.192.na-addr.arpa.
Foto 49: Ka anyi lee anya nke oma igbe nke putara n’elu «Ntọala maka mpaghara site na Linux.fan«. Anyị na-ekwe ka mmelite siri ike na nnyefe mpaghara maka netwọkụ mpaghara ihe ọ bụla.
Foto 53: Ọ bụrụ na anyị gosipụtara ndepụta «tipo:»Nke ndekọ DNS, anyị ga-achọpụta na anyị nwere ike ikwupụta ihe ndị a:
A: IPv4 ngalaba aha translation
AAAA : IPv6 ngalaba aha translation
CNAME: utu aha n'ihi na ngalaba aha
NS: nkesa aha
MX: nnyefe ozi
SRV: SRV ndekọ ọrụ, ọtụtụ-eji Ọrụ Ndekọ na ọrụ ndị ọzọ
TXT: Ndebanye ederede
SPF: Ozi Nzipu Ozi
Foto 54: openSUSE na - eme ka ndụ anyị dịkwuo mfe site na ịghara ikwupụta ihe ndekọ DNS gbanwere. Anyị na-ekwe ka ike mgbanwe mpaghara update na mpaghara nyefe maka mpaghara netwọk.
Foto 55: Mgbe ịmechara nhazi DNS, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịlele ọrụ ya na nhazi nhazi, site na iwu dị mfe njikwa njikwa.
Foto 56: Tupu ị hazie DHCP,, anyị ga-ekenye ndị ọrụ ntanetị nke anyị ga - ahọrọ maka ọrụ ahụ - ọ nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ karịa ihu - Mpaghara na Firewall. Anyị na-ahọrọ Mpaghara Esịtidem nke bụ nke LAN anyị.
Foto 61 na 62: Iji kwusaa DNS dị ike, anyị ga-aga «Ọkachamara DHCP Server Nhazi".
Foto 63: Anyị na-ahọrọ subnet wee pịa bọtịnụ «Di elu«, Ma họrọ nhọrọ«Njikwa TSIG".
Foto 64: Anyị na-ahọrọ igodo TSIG emere n'oge nhazi DNS. Ọ bụrụ na ịmeghị ya mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ime ya ugbu a ma degharịa mmelite dị ike nke mpaghara DNS dịka igodo ahụ mepụtara ebe a.
Foto 65: Anyị laghachi na họrọ subnet ma ugbu a, anyị pịa bọtịnụ «Dezie".
Foto 66: Anyị họrọ Oke mmasi anyị wee pịa «DNS di omimi".
Foto 68: Anyị na-amalite otu emepeuse-desktop.fromlinux.fan nke bụ ihe nke isiokwu anyị na-esonụ, nke anyị na-etinye ma hazie na dns.fromlinux.fan na-agba ọsọ, anyị na-enyocha site na di na nwunye nke dị mfe njikwa iwu na DHCP n'ụzọ ziri ezi emelitere DNS, na na-atụ na laa azu DNS ndekọ maka na ahịa na-laghachi.
Soro anyi na njem ozo!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » DNS na DHCP na openSUSE 13.2 "Harlequin" - netwọk SMB
Daalụ nke ukwuu maka onyinye, amalitere m ịme ya na leta ahụ, ha na-arụkarị ọrụ
Zaghachi to Rulf
Anyi na-anabata gị Rulf. Nnukwu ọrụ bụ inyere ndị na-enweghị mmasị na njikwa ma ọ bụ Terminal aka nke ukwuu, yana maka ndị rutere ụwa anyị ugbu a na Windows-ma ọ bụ na-eche echiche ịwụ elu- ma hụ na enwere distros na-enye ohere nke ịhazi ọrụ dị mgbagwoju anya. iji eserese eserese.
Zaghachi ka nrierico
Eduardo Noel dijo
Ezigbo ederede !!!
Ekwenyere m na gị na ọ nwere ike ịbụ mmalite maka ndị chọrọ ịkwaga Windows.
Zaghachi Eduardo Noel
Ka anyị doo anya na na enweghị ọrụ ndị a enweghị netwọkụ bara uru, mgbe anyị na-ekwu maka DNS na DHCP, anyị na-ekwu maka nkwado zuru oke na ngụkọta ntọala nke netwọkụ, ọ gbasaghị ma ọ bụrụ na ọ bụ SME ma ọ bụ na ọ bụghị, o yiri ka ọ bụ ụgha na anyị na-eme mkpesa na anyị enweghị ozi na aka na FICO na-enye anyị ya n'ụzọ achọghị ọdịmma onwe onye nanị. Anyị amaghị uru nke onyinye a na ụwa Linux na ndị ọzọ maka anyị bụ ndị kwenyere ma tụkwasịrị obi na ngwanrọ n'efu. Ọ na-ewe ọtụtụ ọrụ iji mee ihe ndị dị ka ndị a, nke na-abụghị nkezi, ha gafere ihe uche anyị nwere ike iche. Onwe m, ọ na-eju m anya ịza ajụjụ ole na ole na obere nleta na isiokwu nwere ike ọ ga-enye anyị ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ na ọ na-eme ka anyị hụ na anyị na-arụ ọrụ ebe ọ bụla mgbe anyị jidere ya.
FICO na-aga n'ihu na onyinye gị nke ọtụtụ n'ime anyị ga-agbaso nzọụkwụ gị. Daalụ !!!
Otutu diri unu nile maka ezi okwu, ezi okwu, na n’oge ha kwuru. Ọ bụ nnọọ eziokwu na ọ bụ ọrụ bụ isi na netwọkụ ọ bụla, gụnyere itselfntanetị n'onwe ya.
Ọrụ dị oke egwu ma na-agwụ ike Federico, usoro ọzọ site na nkwụsị nke m na-agbaso, na enweghị obi abụọ ihe niile na-agwụ ka ị na-ekwu, ogo nke nkọwa nke isiokwu gị na-eme ka ị hụ ahụmịhe ị nwere na mpaghara ahụ. Daalụ nke ukwuu maka ezigbo onyinye dị otu a.
Daalụ maka ịza ajụjụ, Lagarto !!!. Chere nke na-esote na CentOS 7 nwere otu ọrụ, mana oge a, ịkasi obi. Ọ na-agwụ ike ịme ụdị ụdị a na onyonyo, ọ bụ ezie na enwere m olileanya na ndị bịara ọhụrụ si na Windows ụwa masịrị ya. 😉
Ismael Alvarez Wong dijo
Ndewo Federico, kedu ọmarịcha ọrụ, ọrụ, bara uru ma dị oke mkpa gbasara ọrụ DNS na ọrụ DHCP ị bipụtara ugbu a. Ihe niile akọwapụtara na nkọwa zuru oke site na ọtụtụ onyogho.
Ọ dị ukwuu otu esi ahazi ihe nkesa DHCP iji kwe ka mmelite di omimi nke ihe ndekọ DNS maka mpaghara ihu na ihu, na-eji otu igodo TSIG ahụ mepụtara na nhazi sava DNS.
Na elu ya niile na nkesa maka "ihe osise" sava dị ka openSUSE (nke m na-arụghị ọrụ ma ugbu a post a na-akpali m ịmụ ya) nke nwere ike ịba uru nke ukwuu maka Windows sysadmis bụ ndị kpebiri ịme njem "dị mma" na Linux .
Ọ dịghị ihe ọ bụla maka isiokwu dị ka nke a bara uru ịgbaso usoro ndị ọzọ ị na-eme atụmatụ ịga n'ihu na-ebipụta banyere usoro "SMEs".
Zaghachi Ismael Alvarez Wong
Ndewo Wong !!!. Banyela na ọkwa a. Ahụrụ m na ụfọdụ ụlọ ọrụ eserese YaST tụrụ gị n'anya. Nke ahụ bụ ezigbo enyi. Ezubere ya n'ụzọ nke na ndị na-esite na Windows anaghị enwe mmetụta na-ahapụ ha na mbido n'ihi ojiji nke njikwa na Linux.
Echiche nke onwe m bụ na ọ dị mfe iji mejuputa, hazie ma jikwaa otu DNS - DHCP ụzọ site na njikwa. Ma anaghị m akwụsị ịghọta uru nke distro a.
OpenSUSE, na onye na-akwado ya, SUSE, bụ nzube zuru oke nke na-abịa na YaST dị ike iji mee ka ndị na-elekọta ọrụ dịrịkwuo mfe.
Obi dị m ụtọ na ị na-agụ ma na-amụ usoro PYMES. Ana m echere gị na m ọzọ obere. Cheers !!!.
N'agbanyeghi na "etinyere m" nwa oge n'ihi nsogbu azụmahịa, nke a na-egosi ịdị mma na ntinye nke ndị injinia ya, anaghị m eji ya dị ka ihe nkesa kama dị ka desktọọpụ, mana enwere m ike ịgba akaebe na akụrụngwa ọ na-enye, ụdị ntọhapụ nke ugbu a : Tumbleweed na Leap dị ezigbo mma, nke mbụ na-agbagharị maka ... ndị mmadụ na-achọ ịtụgharị (: na Leap maka ndị ọrụ siri ike karị, mana iji dokwuo anya na Leap nwere nsụgharị ngwugwu na-enweghị mgbanwe ma dị mma maka onye nrụpụta / sysadmin chọrọ jiri teknụzụ ugbu a Openuse na-anapụta ngwaahịa dị elu karịa ngwaahịa, nhọrọ ị ga-atụle.
Enwere m ogologo oge na-emeghe OpenSUSE Desktop maka Network Enterprise. Ugbu a na m nwara ya na ọrụ, ọ dịkwa m mma. Ekwenyere m na gị n'ihe niile.
Otu esi edekọ ọnụ ma mepụta gif
DRLM: Ihe Nchịkwa Mgbake Ọdachi Dị Ike Maka Linux